नक्कली डाक्टर पक्राउ बिरुद्ध स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी रिहाइ माग गर्ने कस्तानेपाली? #iAmWithCIANepal ~ Khabardari.com
नक्कली डाक्टर पक्राउ बिरुद्ध स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी रिहाइ माग गर्ने कस्तानेपाली? #iAmWithCIANepal
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली डाक्टर पक्राउ गरेको विरुद्धमा वीरगञ्जमा जुलुस निस्किएको छ भने निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारिएको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ वीरगञ्जको आह्वानमा निस्किएको बिरोध जुलुस वीरगन्जको नगर परिक्रममा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको थियो र प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशबराज घिमरेलाई चिकित्सक सङ्घ वीरगञ्जका उपाध्यक्ष डा प्रमोद सर्राफले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । पक्राउ परेका डाक्टरहरूको अविलम्ब रिहाई नभए २४ घण्टाभित्र वीरगञ्जक सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुको आकस्मिक सेवासमेत बन्द गरिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । वीरगञ्जबाट ९ जना चिकित्सक पक्राउ परेका छन् ।